कोरोनाबाट १ लाख ९१ हजार बढीको मृत्यु ,२७ लाखभन्दा बढीमा संक्रमण, निको हुने संख्या कति ? | Samabesi Khabar
कोरोनाबाट १ लाख ९१ हजार बढीको मृत्यु ,२७ लाखभन्दा बढीमा संक्रमण, निको हुने संख्या कति ?
कोरोना भाइरस संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख ९१ हजार ८४ पुगेको छ । पछिल्लो एक दिनमा करिब ९० हजार संक्रमित थपिएका छन् । यससँगै संक्रमितको संख्या करिब २७ लाख २६ हजार ७५३ पुगेको छ । हालसम्म ७ लाख ४९ हजार ८८५ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । विश्वका २१० राष्ट्र तथा यसका प्रशासित क्षेत्रमा कोरोना भाइरस फैलिसकेको छ ।
सबैभन्दा बढी असर अमेरिकामा परेको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा मात्रै अमेरिकामा ३१ हजार ४१९ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । यससँगै त्यहाँ संक्रमितको संख्या ८ लाख ८६ हजार ७०९ पुगेको छ । त्यस्तै, अमेरिकामा मृतकको संख्या ५० हजार २४३ पुगेको छ । अमेरिकामा हालसम्म ८५ हजार ९२२ जना उपचारपछि निको भएका छन् ।
स्पेनमा संक्रमित संख्या २ लाख १३ हजार भन्दा बढी छन् । मृतकको संख्या २२ हजार १५७ पुगेको छ । इटालीमा १ लाख ८९ हजार ९७३ संक्रमित भएका छन् भने २५ हजार ५४९ को ज्यान गएको छ । फ्रान्समा १ लाख ५८ हजार भन्दा बढी संक्रमित हुँदा २१ हजार ८५६ को ज्यान गएको छ । जर्मनीमा १ लाख ५३ हजार १२९ संक्रमित हुँदा ५ हजार ५७५ जनाको ज्यान गएको छ । जर्मनीमा करिब १ लाख ३ हजार जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।
बेलायतमा १ लाख ३८ हजार ७८ जना संक्रमित हुँदा १८ हजार ७३८ जनाको ज्यान गएको छ । चीनमा ८२ हजार ८०४ जना संक्रमित भएका छन् । बिहीबार चीनमा ६ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । चीनमा अहिलेसम्म यसबाट ४ हजार ६३२ जनाको ज्यान गएको छ ।
टर्कीमा १ लाख १ हजार ७९० जना संक्रमित हुँदा २ हजार ४९१ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपालमा भने अहिलेसम्म ४८ जना संक्रमति फेला परेका छन् । १० जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । बिहीबार ३ जना संक्रमित निको भएर घर फर्किंदा ३ जना नै नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
ज्यासन होल्डर सनराइजर्स हैदरवादमा
कोरोना सङ्क्रणमबाट एक कर्मचारीको मृत्यु
वाग्मती प्रदेशले सरकारीस्तरकै पहिलो आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने
सुनकोसीमा मरे किसानका ५० बाख्रा